Xaalada Qalafsan ee Ogadenia kajirta iyo Cabdi iley oo banaanka keenay xaqiiqday Itobiya Qarisay. | ogaden24
Xaalada Qalafsan ee Ogadenia kajirta iyo Cabdi iley oo banaanka keenay xaqiiqday Itobiya Qarisay.
Dec 26, 2016 - Aragtiyood
Waxaa jirta odhaah ama hadal Somaliyed oo ah “Dibiga Dannood dhagihiisu wax fiican ayay maqlaan, indhihiisuna wax fiican ma arkaan”. Macnaha odhaahda ayaa ah mid mug-weyn ku fadhida waxaana lagu fasiray xaaladda haysata Dibiga Dannood. Dibigu marka lo’da lagu horayo ceelka wuxuu maqlaa heesta lagu luuqeeyo marka lo’da la waraabinayo oo aad u waangsan,hase yeeshee marku ceelka soo gaadho,ceelku wuu go’an yahay oo wax biyo ah ugumuu tago.
Xaalka dadka Somalida Ogadenya ayaa lamid ah xaalka Dibigaa. Dadku waxay maqlaan Itoobiya oo meel walba la taagan oo ka sheegaysa inay wax wanaagsan ka qabtay gobolka gaar ahaan dhinacyada biyaha iyo abaaraha, nabad-galiyo iyo barwaaqo ka jirta gobolka, waxaase marwalba ka horyimaada ama caqabad ku ah micnaha ka dambeeya sawirada ay madaxda Itoobiya ama Kililku iska soo duubaan markay safar ku tagaan degmooyinka iyo gobolada. Waxaa kale oo arinkan xoojinaya sawirada ay qurbajoogtu ka soo qaadaan gobolka iyo dadkiisa, kuwooda damiirka lehna waxayba sheegaan xaaladda dhabta ah. Waxaase jira qaar nolosha ka dhacay oo khamsro iyo qayilaad u taga Itoobiya oo sawriradaa iska dhaadhacsiiya beenna isu sheega.
Ilaahay markuu ku khashifayo ceeb ayuu luqunta kuu galiyaa wayna adag tahay inaad ka badbaadid hasuusan Ilaahay ku asturin. Maalmahan Safarka uu Damiir-laawe Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) ku tagay meelo ka mid ah gobolada iyo sawirada uu iska soo qaaday ayaa waxay banaanka keeneen beentii iyo waxay qarinaysa Itoobiya iyo xaaladda qalafsan ee ka taagan gobolka.
Waxba yaanan hadalka kugu daalinine bal adiguba arag sawiradan kadibna isticmaal garaadkaada shakhsi iyo aqoontaada uu Ilaahay ku siiyay, aad u fiiri sawirada – muuqaalada iyo wajiyada dadka ka muuqda sawirada, isku day inaad wax macna ah ama xaalad horay u soo martay maskadaada, dib u celi xusuustaada oo wax ku sheeg ama ka sheeg aragtida kaaga soo baxday sawirada.
Goobtu waa Gunagado ama Marsin (Marsin Qalqalooc) ama meel ka mid ah gobolka Jarar ama Doollo. Sawirkan waxaad ku aragtaa Damiir-laawe Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) oo Baabuur ka dajinaya Jerigaan cad iyo asagoo tunka ku wata laba kiish oo kiish bariis ah. Jerigaanka waxba kuma qorra waxaana u malaynayaa in loola jeedo inay biyo ku jiraan. Labada kiish waxaa ku qoran “Infhadeero High Quality Rice”.
Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay yidhaahdaan sawiradu waa caadi ee xagguu wax iska qaban la’ayahay? Dhammaan waxyaabaha sawirada ka muuqda ayaa ah kuwo nadiif ah, laba askari ayaa baabuurka dusha ka saran, Damiir-laawe Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) kaligii ayaa wax xamaalaya wax dad ama duunyo ah oo kalana kama muuqdaan sawiradaa.
Arimahaa waxay ku tusinayaan inuu wuxuba yahay show ama indha-saracaad uu jilayo macalin damiin ah iyo arday kharaab ah waana Damiir-laawe Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) iyo kooxdiisa.
Baadhitaan ayaan ku sameeyay shirkada Indhadeero iyo inay samayso bariis ama in bariis laga soo saaro ama lagu sameeyo Itoobiya ama Somaliya waxaana ii soo baxday in shirkada Indhadeero laga leeyahay Hargaysa wax bariis ahna aan laga soo saarin ama lagu samaynin Hargaysa iyo Itoobiya. Arinkaa ayaa ku tusinaya riwaayad kale oo rakhiis ah.
Dowladda Itoobiya ayaa looga fadhiyaa inay meel saarto sawiradaa iyo bariiska Indhadeero ee waliba lagu qoray “Infhadeero High Quality Rice” iyo dadka loo qaybiyay.
Sawiradan waxaad ku aragtaan Damiir-laawe Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley)oo afar Jerigaan hordhigay sadex ilmood iyo Damiir-laawe Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) iyo labadiisa gacanyare; Khadar Asaama oo ka mid ah kooxdii dishay Marxuum Faysal Cagjar iyo Cabdi Cali Mataan gudoomiyaha gobolka Jarar. Lama sheegi karo inay Jeerigaanadu madhan yihiin iyo inay biyo ama wax kale ku jiraan waxaanse u qaatay in laga wado inay biyo ku jiraan oo caruurta biyo loogu keenay. Goobta sawirka caruurta ma cadda waxaase loo badinayaaa inay tahay Gunagado waana halkii lagu sheegay “furintaanka mashruuca biyo-galinta Birqod-Gunagado iyo macaaneynta biyaha ceelka Gunagado”.
Maxaa ka khaldan sawiradaa? Labadan sawir ayaa ah kuwa ugu qiimaha badan ee ka tarjumaya xaaladda dhabta ah ee dadka Soomaalida Ogadenya ee ay abaaraha iyo cunaqabayntu saamaysay. Waa maxay sababta biyo loogu dhaaminayo goobo lagu sheegay in loo sameeyay biyo-galin (water network)? Waa maxay sababta afar jeerigaan oo kiiba yahay 20-litir qaad loo hordhigay sadex ilmood oo nafaqo-xumo ba’an hayso? Arimahaa ayaa ku tusinaya ciyaarta dhabta ah iyo xaaladda qalafsan ee haysata shacabka Soomaalida Ogadenya oo lamid ah xaalka Dibigii Dannood ee horay usoo xusnay.
Sawirka caruurtu wuxuu ku tusinyaa xaalad nafaqo-xumo ba’an ah oo ka jirta gobolka meesha sawirka madaxda (sawirka kale ama midigta ah) uu ku tusinayo inay yihiin niman nimcaysan oon xaalad abaar ku jirin.
Sawirka caruurtu wuxuu ku tusinayaa xaaladda nafaqo-xumo nooca ugu xun oo ay hay’adda WHO ugu yeedho “acute and chronic malnutrition” markuu xaal heerkaa gaadho waxaa lagama maarmaan ah inay dowladdu ku dhawaaqdo emeregney state oo gurmad deg deg ah lala soo gaadho dadka tabaalaysan.
Hadaba sawirka caruurtaa ee uu Damiir-laawe Calool-Dabane Cabdi Michael (Cabdi Iley) ka soo qaaday gobolka ee uu waliba ku baahiya social media ayaa ah kuwo qiima wayn ugu fadhiya hay’adaha samafalka, Qaramada Midoobay iyo deeq bixiyaasha.
Sidaa dartee waxaa lagama maarmaan ah inay beesha caalamku, hay’adaha samafalka, Qaramada Midoobay iyo deeq bixiyaashu ay gar-gaar degdeg ah lasoo gaadhaan dadkaa tabaalaysan oo wixii la badbaadin karo la badbaadiyo.